September 30, 2020 adminLeaveaComment on बाबुरामले भेटे डाक्टर केसीलाई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवा`दी नेपालका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अनस,`नरत् डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेटेका छन्। बुधबार साँझ टिचिङ अस्पतालमा अनसन`रत् डाक्टर केसीलाई भेट्न पत्नी हि`सिला र उनी पुगेका हुन्।
उनले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अव`स्था ना`जुक बन्दै गए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्या`न नदिएको भन्दै आ`क्रोश पोखेका छन्। भेटपछि उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्-अरूको स्वास्थ्यका लागि आफ्नो जीवन जो`खिममा राख्दै अनस`नरत डा. गोविन्द के सीको स्वास्थ्य ग`म्भीर बन्दैछ! १९ औं सत्याग्रहको १७ औं दिनसम्म राज्यले वहाँको
जायज मा`ग र जो`खिम उ`न्मुख स्वास्थ्य स्थितिबारे कुनै चा`सो नराख्नु अमा`नवीयताको पराका`ष्ठा हो! @kpsharmaoli सरकार आँखा खोल!’ डाक्टर केसी विगत १७ दिनदेखि अन`सन बसेका छन्। चि`कित्सा शिक्षा सु`धारमा आफूले राखेको मा`ग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै उनी १९ औं पटक अन`सन बसेका हुन्।
पटक पटक सरकारले मा`ग पूरा गर्ने प्रतिव`द्धता व्य`क्त गरे पनि कार्या`न्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई द`बाव दिन उनी अन`सन बसेका हुन्। सेतो पाटि बाट साभार गरिएको हो।